मंगलबारको दिन गणेश भगवानको गर्ने विधि पढ्नुस् सक्दो शेयर गर्नुस् ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/मंगलबारको दिन गणेश भगवानको गर्ने विधि पढ्नुस् सक्दो शेयर गर्नुस् !
मंगलबार को दिन कस्ता कस्ता कामहरू गर्न हुदैन ? यहाँ शास्त्रअनुसार मंगलबारको दिन गर्न नहुने काम तल उल्लेख छ । सोमबार, बुधवार र शुक्रवारलाई सोम्यबारको श्रेणीमा राखिएको छ भने आइतबार र बिहीबारलाई कडाबारको श्रेणीमा राखिएको छ । मंगलबार तथा शनिबार क्रुर अर्थात पापी बारको श्रेणीमा पर्छन् । मंगलबारलाई अत्याधिक क्रुरबार मान्दै शास्त्रमा यसलाई शरीरमा रक्त सञ्चार गराउने धमनीसँग सम्बन्धित मानिएको छ । मानिसको शरीरमा हुने रातो पदार्थ मंगलसँग सम्बन्धित मानिन्छ ।
कालपुरुष सिद्दान्त अनुसार प्राणीको हाड र रक्त तथा मज्जा मंगलसँग सम्बन्धित छ । मंगललाई सबै ग्रह मध्ये क्रु’र र र’क्तपातको ग्रह मानिएको छ । मंगलको रातो रंग मृ’त्यु वा र’गत सँग हुन्छ । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न काम ब’र्जित गरिएको छ ।
यी काम मंगलबार गर्दा तपाइँको जीवनमा स’मस्या बढ्न सक्छन् । के हुन् त मंगलबारको दिन गर्न नहुने कामहरुः
१ मंगलबारको दिनमा पशु बलि दिनु अत्यन्तै ख’राव मानिन्छ । यसले सन्तानमा न’कारात्मक प्र’भाव पर्ने हुन्छ ।
२ मंगलबार कुखुरा वा अन्य पंक्षीको ‘ह’त्या गर्दा मानिसको बुद्धी भ्रमित हुने मानिन्छ ।
३ मंगलबारको दिन माछा खाँदा तपाइँलाई आर्थिक नो’क्सानी हुने मानिन्छ । मंगलबार मासु पनि सेवन गर्नु हुँदैन । मासु खाँदा कुटुम्बको क्ष’य हुन्छ ।
४ मंगलबारको दिन म’दिरा सेवन गर्दा तपाइँको क्रो’धमा वृद्धी हुन्छ । यसले अ’पराध समेत बढाउँछ ।
५ मंगलबार झ’ग’डा गर्दा बे’इज्जत हुने ख’तरा हुन्छ ।
कोरो’नाको कहरः आज थप ५ जनाको मु’त्यु, नेपालमा कोरो’नाले ज्या’न गुमाउनेको संख्या ७० पुग्यो